Liver Transplant – Wecaremyanmar
ယနေ့ခေတ်လူတွေဟာ အစားအသောက်၊ အရက်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတွေဟာ ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်သက်ရာက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိလာကြပြီလို့ထင်ပါသလား? အသည်းရောဂါတွေကရော လျှော့ကျလာပြီလား?
လူတွေဟာတော်တော်လေးကို သတိထားမိလာကြပါပြီ။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို ပိုမိုပြီး သတိထားတတ်လာကြပါတယ်။ သို့သော် အစားစားအသာက်ပုံစံတွေဟာ အနောက်တိုင်းဆန်လာတာတော့ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေတော်တော်များများမှာ အသည်းအဆီဖုံးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးခြင်းဟာ အသည်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေနိုင်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာအသည်းခြောက်သည်အထိဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းဟာလည်း အမှန်တကယ်တော့ သိသိသာသာ လျှော့ကျမလာသေးပါဘူး။ လူငယ်တွေအပြင် အမျိုးသမီးတွေပါသောက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း များပြားလာပါတယ်။
လူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်(သို့မဟုတ်) သူတို့ဆွေမျိုးတွေကိုထိမှသာ ကြောက်ရကောင်းမှန်းသိကြတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ? လူငယ်တွေအတွက် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေဖို့ရော လိုအပ်လား?
ကာကွယ်ခြင်းဟာကုသခြင်းထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တာဟာ ရောဂါကို စောစောသိနိုင်ပြီး စောစောကုသလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုစစ်ဆေးမှုတွေဟာ ကုန်ကျစရိတ်ရှိပြီး ရောဂါအားလုံးအတွက်လျှောက်စစ်နေလျှင်လည်း ငွေကုန်သလောက်အကျိုးမရှိပြန်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အသက်၁၈နှစ်မှ၄၀နှစ်အတွင်း မိသားစုထဲမှာလည်း ရောဂါဖြစ်ဖူးသူမရှိဘူးဆိုရင် ၅နှစ်တစ်ခါလောက် ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီး လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုလေးတွေလုပ်လျှင် လုံလောက်ပါတယ်။ အသက် ၄၀ကျော်လျှင်တော့ ၁နှစ်၁ခါ သို့မဟုတ် ၃နှစ်၁ခါလောက် ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ပိုသက်သာပြီး ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကတော့ ရောဂါနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သတိထားနေဖို့နဲ့ လူနေမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲပစ်ကြဖို့ပါဘဲ။
အသည်းရောဂါပိုဆိုးလာတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ? ဘယ်အဆင့်မှာ အသည်းအစားထိုးဖို့လိုအပ်ပြီလဲ?
အသည်းရောဂါတွေဟာ အသည်းခြောက်ခြင်း(Cirrhosis of Liver)လို့လူသိများတဲ့ အဆင့်ကိုမရောက်ခင်မှာ အဆင့်များစွာရှိပါသေးတယ်။ ကောင်းမွန်သောအသည်းသည် (ရောဂါဖြစ်စေသောအချက်များကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်လျှင်) သူ့အလိုလိုပြန်ကောင်းနိုင်ပြီး အမာရွတ်တက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမာရွတ်တက်တာတွေများလာပြီး အသည်းခြောက်သည့်အဆင့်သို့ရောက်သွားလျှင်တော့ ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ပါ။ အသည်းခြောက်ခြင်းပြင်းထန်လာလျှင် အသည်းအစားထိုးကုသရသောအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ အသည်းရောဂါကိုဖြစ်စေသောအချက်များကို သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖျားနာခြင်း(Viral Illness)၊ အဆီဖုံးခြင်း(Fatty Invasion)၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန်ခြင်း(Metabolic Disorder)၊ မျိုးရိုးဗီဇ(Genetic)၊ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များ(Birth Disorder)နှင့် ကင်ဆာရာဂါများကြောင့် အသည်းရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ A ပိုး (သို့မဟုတ်) E ပိုးနှင့် မျှော်လင့်မထားသော ဆေးဝါးတုန့်ပြန်မှုများသည် အသည်းကိုထိခိုက်နိုင်ပြီး ပြင်းထန်သောအသည်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောဂါကို လွယ်လွယ်သိရှိနိုင်ပြီး အသည်းအစာထိုးကုသရသည်အထိ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမများရအောင် ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်လို့ရလား?
အသည်းရောဂါကိုစောစောသိနိုင်မယ်ဆိုရင် အသည်းခြောက်သည့်အဆင့်ထိ မရောက်အောင် ထိန်းချုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုး C ပိုး ကူးစက်ခံရသောလူနာများအတွက် ထိရောက်သောဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသည်းရောဂါပိုဆိုးမလာအောင် တားလို့ရပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့။ ထိုနည်းတူစွာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါမပြန့်ပွားအောင် လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းရောဂါမပြန့်ပွားအောင် အရက်ကိုစနစ်တကျရှောင်ကျဉ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ အသည်းရောဂါက ဘယ်လိုလူတွေမှာ အဖြစ်များလဲ? ဥပမာ- အသက်အရွယ်၊ ကျား၊ မ အစရှိသဖြင့်။
အသည်းရောဂါဟာ အရမ်းငယ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာဆိုရင် မွေးရာပါသည်းခြေပြွန်မပါသောရောဂါ (Biliary Atresia) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုရောဂါတွင် ကလေးသည် ဝါလာတတ်ပြီး အသည်းအစာထိုးကုသမှု လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ကလေးအသက်၅လအရွယ်မှာ အသည်းအစားထိုးကုသမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အချို့သောဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန်မှုများကြောင့်လည်း ကလေးများကို အသည်းအစားထိုးကုသဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- Wilson’s Disease (မွေးရာပါ ကြေးနီဓာတ်ဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန်သောရောဂါ)၊ progressive familial intrahepatic cholestasis (မွေးရာပါ အသည်းအတွင်းစစ်ထုတ်ရည်များ အနည်ထိုင်သောရောဂါ)၊ glycogen storage disorder (မွေးရာပါ ဂလိုက်ကိုဂျင်သိုလှောင်မှုမူမမှန်သောရောဂါ)စသည်တို့ဖြစ်သည်။ လူကြီးတွေမှာတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းရောဂါသည် ယောက်ျားလေးများတွင် အဖြစ်များပါသည်။ အရက်ကြောင့်ဖြစ်သောအသည်းရောဂါသည် ယောက်ျားလေးများတွင် အဖြစ်များနေဆဲဖြစ်သော်လည်း မိန်းကလေးများတွင်ဖြစ်ပွားနှုန်းသည်လည်း တနှစ်ထက်တနှစ် တိုးပွားလာလျှက်ရှိသည်။ အသည်းကင်ဆာ(Primary HCC) ဖြစ်လျှင် အသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီး အသည်းအစားထိုးကုသဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ အသည်းအစားထိုးလေ့ရှိလဲ?
ကလေးတွေမှာတော့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် အသက်၆လနှင့်၂နှစ်အကြားမှာ အစားထိုးပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာတော့ အသက်၅၂နှစ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်များပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် အသက်၇၀လောက်အထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လူငယ်တွေမှာရော ပြင်းထန်သောအသည်းရောဂါတွေကို ခံစားနေရသေးလား? ဘာကြောင့်လဲ? ဘယ်လိုစစ်ဆေးကြမလဲ?
လူငယ်တွေကြားမှာ အရက်သောက်ခြင်းနှင့် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းသည် ပြင်းထန်သောအသည်းရောဂါကိုဖြစ်စေသော အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူငယ်များသည် အသည်းရောဂါ၏ပြင်းထန်ပုံကို သတိရှိသင့်သည်။ အသည်းရောဂါအစပျိုးကာစတွင် လူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ အရက်ကိုစနစ်တကျရှောင်ကျဉ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသောသူများသည် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ထိရောက်သောဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းဖြင့် အသည်းကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးမပျက်စီးအောင် ထိန်းထားနိုင်ပါသည်။
လူတော်တော်များများက အသည်းအစားထိုးခြင်းသည် လွယ်ကူသည်ဟု ထင်နေကြသည်။ အသည်းအလှူရှင်သည် သူ၏အသည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေးမည်။ ထို့နောက် အလှူရှင်မှာရောလူနာမှာပါ အသည်းသည်ပုံမှန်ပြန်လည်ကြီးထွားလာမည်ဟု ထင်ကြသည်။ အသည်းအစားထိုးလျှင် အောင်မြင်မှုနှုန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ? ထပ်ကာထပ်ကာအစားထိုးလို့ရောရလား?
လောလောဆယ်အထိတော့ အသည်းအစားထိုးခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးနေဆဲပါပဲ။ ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ဖို့အတွက် အတွေ့အကြုံများများလိုအပ်ပါတယ်။ သေချာအစီအစဉ်စွဲရပါတယ်။ လှူလိုက်တဲ့အသည်းအစိတ်အပိုင်းဟာ အလှူရှင်မှာရော လူနာမှာပါ လျှင်မြန်စွာပြန်လည်ကြီးထွားလာတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းဟာ အသည်းလှူဒါန်းဖို့ သင့်တော်တဲ့အခြေအနေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုနှုန်းကတော့ ၉၀% မှ ၉၅%ထိရှိပါတယ်။ နာတာရှည်အသည်းရောဂါသည်တစ်ယောက်ဟာ ၁နှစ်လောက်တောင် အသက်မရှည်နိုင်တော့ချိန်မှာ အသည်းအစားထိုးခြင်းဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ရှင်သန်သွားလို့ရပါတယ်။ အချို့ရောဂါများသည် အသည်းအစားထိုးပြီးနောက် ပြန်ဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိပါတယ် ဥပမာ- အသည်းရောင်အသားဝါပိုးပြန်လည်ကူးစက်ခံရခြင်း၊ အရက်ပြန်သောက်ခြင်းကြောင့်အသည်းရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်း။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် အကယ်၍အသည်းခြောက်သွားပါက အသည်းနောက်တစ်ကြိမ်အစားထိုးရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အသည်းရောဂါမဖြစ်အောင် လူတစ်ယောက်သည် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်ပါသလဲ?
အသည်းသည် အရက်၏ပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာ ချေဖျက်ပေးနိုင်တာပါ။ ထို့ကြောင့် အသည်းပျက်စီးတာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် အရက်ကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့သောက်သင့်ပါတယ်။
၂) ပြည့်ဝဆီများ၊ အသွင်ပြောင်းဆီများစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ
ပြည့်ဝဆီများသည် အကျက်လွန်အောင်ကြော်ထားသောအစားအစာများ၊ အနီရောင်အသားများနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်တတ်သည်။ အသွင်ပြောင်းဆီများသည် ကြာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ထားသော အသင့်စားအစားအစာများတွင် ပါဝင်တတ်ပါသည်။ အသည်းသည် အဆီပိုများကိုစုဆောင်းထားပြီး အသည်းအဆီဖုံးရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
BMI (Body Mass Index) ကို 28 ထက်နည်းအောင်လျှော့ချပါ။
၄) အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုစားပါ ဥပမာ- ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးများ၊ အစေ့အဆံများ။ အသားဓာတ်အတွက် ငါး၊ ပဲ၊ အခွံမာအသီးများစားပါ။ အနီရောင်အသားများကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။